घरमै सिहं पालेर सँगै खाने र सुत्ने गर्छन् यी व्यक्ति… « Pariwartan Khabar
घरमै सिहं पालेर सँगै खाने र सुत्ने गर्छन् यी व्यक्ति…
२९ जेठ २०७६, काठमाडौं
पाकिस्तानको मुल्तान भन्ने ठाउँमा जुल्केफ नाम गरेको व्यक्तिले घरमै सिहं पालेर दुनियाँलाई अहिले चकित पारेका छन् । घरमा ल्याएर पालेको मात्र कहाँ हो र ! सँगै खाने, सँगै सुत्ने समेत गर्ने गरेका छन् । जुल्फेकले सिहंलाई बब्बर भनेर बोलाउँले गर्छन् ।
बब्बरका कारण उनको परिवारमा कुनै पनि समस्या निम्तिएको छैन् भनेर जुल्फेकले खुलासा गरेका छन् । साथै उनको परिवारका सदस्यह? पनि सिहंसँगै रमाएर दिन बिताउँने गर्छन् । बब्बर ७ महिना देखि जुल्फेकको परिवारमा सदस्य बनेर बसिरहेका छन् ।
जुल्फेकले सम्बन्धित निकायबाट सिंहलाई घरमा राख्ने अनुमती लिएको जानकारी दिएका छन् । सिहं ३ लाखमा किनेको र यसलाई पालन पोषणको लागी महिनाको २ लाख सम्म खर्च हुने उनले बताए ।
बब्बरलाई राख्नका लागि उनले छुट्टै स्थान बनाएका छन् र जुल्फेकको घरमा बब्बर हेर्नका लागि गाउँलेह? लस्कर लाग्ने गर्दछन् । उनले बब्बरलाई घरमा ल्याएर पाल्न थालेपछि बब्बरका हरेक क्रियाकलाप देखेर गाउँलेहरु चकित भएका छन् । जुल्फेक अहिले बब्बरका कारण विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट छाइरहेका छन् । एजेन्सी..
कस्तो निर्दयी छोरा,अपार्टमेन्टको चौथो तल्लाबाट धकेली आमाको हत्या
०२ असोज २०७६, काठमाडौं भारतको राजकोटस्थित एक अपार्टमेन्टको चौथो तल्लाबाट छोराले आमालाई धकेलेर हत्या गरेको
एक वैज्ञानिकको अनुसार चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा रात पर्दै..
०१ असोज २०७६, काठमाडौं चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अब रात पर्न लागेको नासाको लुनार रिकोनेसा अर्बिटर
यसकारण सल्किन्छन् विवाहित पुरुष पराई स्त्रीसँग
०१ असोज २०७६, काठमाडौं विवाहपछि चाहे पुरुष होस् या महिला। तेस्रो व्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँस्न पुगेका
मोरङमा एकै पटक तीन सन्तानको जन्म !
३१ भदौ २०७६, काठमाडौं मोरङको पथरीमा एक महिलाले ३ सन्तानलाई जन्म दिएकी छिन । मोरङको